Arrimaha xukun / batari waa wax aan waxba cusub ee smart dadka isticmaala telefoonka iyo in uu yahay mid run ah in ay dhacdo iPhone iyo sidoo. Inta jeer ee, marka laga reebo arrimaha la xiriira hardware ah, qaar badan oo ka mid ah muuqaalada culus oo u baahan awood batari dheeraad ah oo ku jira dambiilayaasha ka dambeeya ku amraya arrimaha la xiriira on iPhone. Waxaan sidoo kale la hadlayaan doonaa qaar ka mid ah sababaha hoos ku teedsan xal ay.
Facebook auto play dheecaan ka batteriga
App Facebook ayaa ku iPhone yimaado la auto meel play default u videos ee feed. Tani waxay cuni karaa in aad batteriga iyo WiFi si dhakhso ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira arin deg deg ah, waayo, taasu, aad si fudud u leeyihiin in ay xidhi doonto doorasho Auto Play ee app Facebook ah oo halkan sida loo sameeyo.
Tag Settings> Facebook> Settings> Auto Play ka dibna dooro 'WiFi Keliya' ama 'Off'.
Mase 'Off' waxaa ay noqonaysaa talaabo ah lagu taliyay in ay u badbaadin doonaa xoogaa kasta oo batari aad iyo aad ha u ciyaaro videos kaliya haddii aad doorato in aad sidaas samayso.
Faaiidaysta Jack is fudud u ineysan (gaar ahaan in ay dhacdo lagu daydo cusub tan iyo markii iPhone 5)
Inta badan tani waxay dhici lahaa oo kaliya haddii aad isticmaalayso xisbi 3aad ku amraya cable ama cable ay bixisay Apple waa mid ka mid ah oo khaldan. Si kastaba ha ahaatee ikhtiyaarka ugu fiican ee this hagaajin waa inaad la xiriirto Apple u cable cusub ama bedelkiisa haddii aad weli damaanad ah.
Qaladka 'cable Tani ama siyaada aan shahaado oo laga yaabaa in aan lagu kalsoonaan karo iyadoo iPhone shaqayn'
Mar kale, tani waxay noqon kartaa arrin hardware ah ama si fudud xaqiiqda ah in aad isticmaasho ka cable xisbiga 3aad. Xiriirka Apple si loo hubiyo in aad cable waa shahaado MFI noqon lahaa fikrad aad u fiican kiiskan oo aad hesho bedelkiisa haddii loo baahdo. Haddii in sidoo kale ma xallinayo arrintan markaas waxa ay noqon kartaa qaladka ah la dekedda amraya sidoo; in aad sidoo kale waxa ay bedeli kartaa naftaada ama la xiriir Apple, waayo, waxaa lagu talinayaa in dambaysta ah.
Nolosha Battery hoos u tan iyo macruufka 9 casriyayn
Casriyayn software kasta noqonin mid horseeda in nolol batari fiican, taas waxaa daliil u ah dhacdo macruufka 9 sida la update tan inta badan isticmaala iPhone bilaabay warbixinta noloshu ka soo baxdaaye batari hoos u. Waddada looga baxo xaaladan waa in la hubiyo in aad isticmaasho goobaha filaayo in iftiinku, WiFi, Bluetooth iwm si batari dheecaan waa ugu yaraan dhashay.
U dayactir nolosha batari la iPhone soo celiyo
Resetting aad iPhone waa si kale oo lagu xallinayo arrintan batari dheecaan ah. Waxaad samayn kartaa:
Wada saxaafadda badhamada Hurdada iyo Home ilaa telefoonka la xidho; bedesheen telefoonka ka dib waa in ay u badan tahay hagaajin arrinta.
Tag Settings> General> celi> celi Settings oo dhan ama masixi Content oo dhan iyo Settings (taas oo ah in ka badan xad-dhaaf ah). Xusuusnow in dib adag tirtiri doonaa xogta oo dhan, iyo sidaa darteed ma waxaa lagu talinayaa haddii lagama maarmaan.
Demi saamaynta Parallax
Habkaani wuxuu ku cajiib ah oo iPhone, Parallax, oo awood u isbadalka siman iyo saamaynta boggan yimaado qiimaha isticmaalka batari sare. Waxaa sidoo deminta kaa caawin kara inaad badbaadin badan oo batari inta lagu jiro maalinta. Si taas loo sameeyo tagaan si ay Settings> General> Helitaanka ka dibna deselect 'In la dhimo Motion'.
Daminaaya updates auto sidoo kale badbaadin kartaa iPhone ee nolosha batari, si ay u sameeyaan in ay tagaan Settings> Lugood & App Store ka dibna hoos u dhaqaaq 'Automatic Downloads' iyo furmaan downloads si toos ah u Music, Apps, Updates iyo Isticmaalka gacanta Data.
Feature Tani waxay u ogolaaneysaa Chine in ay dhaqaalo ka helo si toos ah ee asalka u baahan batari dheeraad ah oo loogu talagalay in si kastaba ha ahaatee waxaad u celin karaa si uu u badbaadiyo nolosha batari iPhone ee. Tag Settings> General> Dami Background App.
Sida loo damiyo Airdrop
Airdrop waa muujinta kuu oggolaanaysa in aad la wadaagto files badan WiFi isla kale dadka isticmaala iPhone iyo waxa dhab ahaan waxay u baahan tahay awood badan batteriga mar walba oo ay tahay mid ay. Haddii aad qabto ma sheegin wax sabab loo isticmaalo, waxa uu noqon lahaa fikrad wanaagsan in la dami habkaani si ay u joojiyaan siibatay aan loo baahnayn la'aan batari ku saabsan iPhone. Tag Xarunta Xakamaynta> AirDrop ka dibna dooro Off.
Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad Dib Marka la 6s New iPhone (Plus)
> Resource > iPhone > Common iPhone dhibaato ku amraya oo xal